WhatsApp dia manitatra ny fandidiana amin'ny fitaovana taloha kokoa mandritra ny enim-bolana | Vaovao momba ny gadget
Miresaka betsaka momba ny BlackBerry isika tato ho ato, na noho ny fandefasana terminal vaovao, noho ireo maodely vaovao havoakany eny an-tsena miaraka amin'ny klavier ara-batana ... Tonga ny anjarany hiresaka tsy momba ny maodely ankehitriny, fa momba ny maodely antitra. Volana vitsivitsy lasa izay, nanambara i WhatsApp, toa ny Skype, fa hijanona ny fanomezana serivisy ho an'ny fitaovana misy rafitra fiasa efa antitra, toa ny finday avo lenta miaraka amin'ny Android hatramin'ny 2.2, iOS 6, S40 ary S60 avy amin'ny Nokia, BlackBerry OS, Windows Phone 7 ary BlackBerry OS. Saingy mbola afaka manohy mampiasa ny WhatsApp mandritra ny enim-bolana manaraka ihany ireo mpampiasa an'ireny terminal veteranina taloha ireny, noho ny fanitarana vao nambaran'ny WhasApp ho an'ireo mpampiasa ireo.
Any amin'ny firenena maro, indrindra ireo manana toekarena mivoatra, ny fidirana amin'ireo terminal misy endri-javatra maro dia mbola voafetra ihany ary ny kaonty tokana azonao vidiana dia tsy misy tanana na terminal izay efa nahazo tanana faharoa ary amin'izao fotoana izao tsy manana safidy hafa.
Saingy ny tranga BlackBerry 10 dia manaitra, rafitra miasa miaraka amin'ny BlackBerry no nanandrana mamerina ny fizarana tsena ary ny fiasan'izy ireo dia tena mitovy amin'ny an'ny Android, raha ny marina dia namela anay hametraka rindranasa Android tamin'ny fanaovana fanitsiana vitsivitsy. Ny fe-potoana vaovao nambaran'ny WhatsApp dia ny 30 Jona 2017. Amin'io daty io, ireo mpampiasa izay manohy mampiasa terminal izay tsy raisina ho isan'ireo tohanan'ny WhatsApp dia tsy afaka mampiasa ilay application intsony.
Ny WhatsApp dia tsy voalohany ary tsy izy koa no ho developer farany mandao lampihazo, satria lany andro ary tsy afaka manolotra ny fepetra fiarovana isan-karazany atolotray ho antsika ny fanavaozana vaovao. Skype dia iray amin'ireo serivisy izay nijanona tsy niasa tamin'ny terminal intsony amin'ny Android misy ambany noho ny 4.1, noho ny antony mitovy amin'ny WhatsApp.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » WhatsApp dia manitatra ny asany mandritra ny enim-bolana amin'ny fitaovana taloha
Manitatra ny elanelana WIAM i Wolder miaraka amina modely efatra, izay miavaka ny WIAM # 65 Lite